Re कारणहरू कल ट्र्याकिंग र एनालिटिक्स लागू गर्न Martech Zone
Re कारणहरू कल ट्र्याकिंग र एनालिटिक्स कार्यान्वयन गर्न
बुधवार, मई 20, 2015 शुक्रबार, मे 21, 2021 Douglas Karr
एक आगन्तुक तपाइँको उद्योग मा एक साधारण कुञ्जी शव्दको प्रयोग गरेर तपाइँको साइट फेला पार्दछ। तिनीहरू आफ्नो स्मार्टफोन मार्फत तपाईंको गृह पृष्ठमा अवस्थित छन्, गृह पृष्ठ खोल्नुहोस्, र तपाईंको व्यवसाय फोन नम्बर द्रुत रूपमा फेला पार्नेछन्। को नम्बर राम्रोसँग लि linked्क गरिएको छ स्वचालित रूपमा कल गर्न को लागी जब तिनीहरू फोन नम्बर मा क्लिक गर्छन्। सम्भावनाले तपाइँको प्रतिभाशाली इनबाउन्ड टीमलाई बोल्छ जसले तिनीहरूलाई छिट्टै बन्द गर्दछ।
दुर्भाग्यवस, यो ठूलो खबर होइन। तपाईको फोन नम्बर हो हार्ड कोडेड तपाईंको वेब टेम्प्लेटमा। नतिजाको रूपमा, तपाईंलाई थाहा छैन कि आगन्तुक कहाँबाट आए र कुन अभियान, यदि कुनै छ भने, बन्द बिक्रीलाई श्रेय दिन। यदि तपाईंले कल-ट्र्याकिंग समाधान कार्यान्वयन गर्नुभयो भने, तपाईंसँग धेरै फरक कथा हुन्छ। प्रयोगकर्ता तपाईंको साइटमा अवतरण भएको थियो र एक नयाँ फोन नम्बर गतिशील रूपमा खोजी अभियानमा कुञ्जी शब्दको आधारमा उत्पन्न गरिएको थियो। व्यक्तिले त्यो नम्बर कल गरेको थियो, कल कलमा दर्ता गरिएको थियो विश्लेषण, र बिक्री कुञ्जी शब्द र खोज अभियानमा राम्रोसँग श्रेय दिइएको थियो।
जबकि यो वर्ष पहिले उद्यम निगमहरूको लागि वैकल्पिक लक्जरी थियो, कल ट्र्याकिंग र विश्लेषण अब सस्तो समाधान हो। स्मार्टफोन व्यवहारको साथ लागतलाई कम्पाउन्ड गर्नुहोस् - जुन स्काय्रोकेटिंग हो - र यो प्रविधि अपनाउने तपाईंको लागि समय आएको छ! मलाई विश्वास गर्नुहुन्न? यहाँ critical महत्वपूर्ण तथ्या statistics्कहरू छन् जुन कल ट्र्याकि of अपनाउने समर्थन गर्दछ:
मोबाइल खोजी बृद्धि २०१ by सम्ममा व्यवसायलाई billion billion बिलियन कलहरू उत्पादन गर्ने अनुमान गरिएको छ
सर्वेक्षण सर्वेक्षणकर्ताहरु respond१% भन्छन् क्लिक-टु-कल कुञ्जी हो किनमेल को खरीद चरण मा
Se०% मोबाइल खोजीकर्ताले क्लिक-टु-कल प्रयोग गरी सिधा ब्यापारको साथ जडान गर्नको लागि खोज परिणाम
स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूको 79 users% प्रयोग स्थानीय खोजी, हप्तामा एक पटक%%%, कम्तिमा daily 89%
Of 57% व्यक्ति कल गर्दछन किनकि तिनीहरूaलाई कुरा गर्न चाहन्थे वास्तविक व्यक्ति
व्यवसायहरूले १%% प्राप्त गर्यो कल भोल्यूममा वृद्धि वर्षौं बर्ष
इनबाउंड फोन कल रूपान्तरण वेब लीडहरू भन्दा १०-१-10 पटक बढी
As कलरेल राख्दछ, तपाईंको सम्भावनाहरू फोनमा पहिले नै छ। प्रश्न यो हो कि उनीहरूले तपाईंलाई कल गर्दै थिए र तपाईंले यसलाई ट्र्याक गर्दै हुनुहुन्छ।
खुलासा: म एक सम्बद्ध हुँ कलरेल
टैग: विश्लेषणात्मक कल ट्र्याकिंगकल एनालिटिक्सकल रेलकल ट्र्याकिंगकलरिल
सामग्री मार्केटिंग क्युरेसन र सिर्जनाको सन्तुलन हो
के मापन मार्केटर्स अनलाइन सफल हुनको लागि आवश्यक छ
जनवरी 4, 2016 मा 11: 38 एएम
यो लेख पढेपछि सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ :) लेखको लागि धन्यवाद। तथ्याङ्क प्रभावशाली छ, र यदि तपाईंलाई कल ट्र्याकिङको बारेमा केही थाहा छैन भने पनि, यसले तपाईंलाई यसको फाइदाहरूको बारेमा सोच्न बाध्य तुल्याउँछ। कलरेल एक उत्कृष्ट निर्णय जस्तो देखिन्छ, र त्यहाँ अन्य प्रदायकहरू जस्तै Avidtrack, Ringostat, Dialogtech छन्।